Dil Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho -
HomeWararkaDil Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Dil Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
March 11, 2018 F.G Wararka 0
Wararka laga Helaayo Degmada Yaaqshiid Gaar ahaan Labaajada Mahad Alla Ayaa Sheegaya in duhurnimadii maanta lagu Dilay ilaa Saddex qof oo mid ka mid ah uu yahay Askari ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dadka Goobjoogayaal ah ayaa sheegay rag hubeysan oo Shabaab ka tirsan in agagaarka Labaajada Mahad Alla ay ku dileen Saddexdaasi qof, kadibna ay goobta ka baxsadeen.
Ragga hubeysan ayaa marka hore toogtay Askariga, kadib waxa ay halkaasi ku dileen labada qof ee shacabka ahaa, Shabaabka dilka geystay ayaa qaatay Qoriga iyo Booshashkii uu watay Askariga.
“Walaalow waxaa degmada Yaaqshiid ka dhacay, dil rag hubeysan oo Shabaab ka tirsan ay u geysteen ilaa Saddex qof oo mid uu ahaa Askari, halka labada kalena ay ahaayeen shacab, Askariga qorigiisa iyo booshashkii uu watay ayay qaateen, waxaan u maleynaa shacabka in loo dilay in ay arkayeen markii uu dilka dhacayay”. Ayuu yiri Qof goobjooge ah.
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa goobta ka qaaday meydka Askariga la dilay iyo labada qof ee shacabka ah, waxayna Ciidamada halkaasi ka wadaan baaritaano la xiriira sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii dilka geystay.
8-dii bishan March Koox ku hubeysan bastoolado ayaa xili habeen ah xaafadda Koodka ee Degmada Xamar Weyne gaar ahaan meel ku dhow xarunta Gobolka waxa ay ku dileen Muuse Mackow oo ka mid ahaa ganacsatada suuqa weyn ee degmadaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo ka hadlay dilkaasi ayaa sheegay in Hay’adaha ammaanka ay dilka Muuse u soo qabteen dhowr qof, oo baaritaano ay ku socdaan, wuxuuna tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin rag dil geystay oo baxsada.
Ragga Shabaab ka tirsan ee wata Bstooladaha ayaa magaalada Muqdisho inta badan ku dila xubnaha ka tirsan Dowladda Federaalka, Askarta iyo xubnaha kale ee ay doonayaan, welina Dowladda Federaalka lama aysan imaan qorshe cad oo looga hortagi karo dilalka dhaca.
Maalmahan dambe waxaa yaraa dilalka qorsheysan ee ay gaysan jireen Kooxaha Bistooladaha wata, kadib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kordhisay hawlgalada lagu sugayo ammaanka caasimada Muqdisho.